कमरेड ओली, पार्टी फुटको श्रेय लिन तयार हो ? - Dainik Online Dainik Online
कमरेड ओली, पार्टी फुटको श्रेय लिन तयार हो ?
यतिबेला कमरेड प्रचण्डको हवाला दिँदै ‘आ–आफ्नो बाटो लागौं’ भन्ने कमरेड केपी शर्मा ओलीको भनाइ भाइरल भइरहेको छ । यसले एक प्रकारको तरङ्गले अन्योल, उत्साह र आशंका उब्जाएको छ । महासचिव कमरेडको ‘बिज्ञप्ति’ पनि अभिलाक्षणिक छ र कतिपय नेताहरुले ‘गम्भीर’ सरोकार व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।
राजनीतिक दस्ताबेज टेवल गरेपछि बिचारका आधारमा बिभाजन पैदा हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । तर, जतिसुकै ठूलो राम्रोको लागि बिभाजन स्वीकारिए पनि बुझिने कुरा भनेको स्वार्थको कारणले फुटेको भन्ने नै हुने भयो, यो राजनीतिको लागि अस्वस्थकर नै मानिन्छ ।
बिभाजन होला नहोला फरक पर्दैन, गत्यावरोध हट्ने होइन आशा बिश्वास र उर्जामा गुणात्मक अन्तर आउने होइन, देश र जनताको हितमा कार्यक्रमिक सुधार हुने होइन । सँगै रहँदासम्म कार्यकर्ता सधैं फुटको आशंकामा दिन गनेर बस्ने नै हो । तर पनि मानिसहरु फुटभन्दा एकता (शब्द) को पक्षमा देखिन्छन्, फुटको पक्षमा होइन । यो मनोविज्ञान मात्र होइन, यसमा पनि कार्यकारण सम्बन्ध खोज्नु आवश्यक छ ।
विगतमा दरबार हत्याकाण्ड पछि राजामार्फत निरंकुश शासनको सुरुवात गर्ने, जनयुद्धको विरुद्ध मुद्दामा सम्भावनाको हदसम्म एकता कायम गर्ने (राजनीतिक शक्तिहरुलाई पछि लगाउने ) अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने र शानदार सत्ता चलाउने महत्वाकांक्षासँग राजालाई आलङ्कारिक राखेर संसदीय व्यवस्थाको नाममा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी सत्ता (कन्जरवेटिभ प्रोग्राममा आधारित ) चलाउने दुई महत्वाकांक्षा बीचको टकरावको कारण वैदेशिक शक्तिको माओवादीलाई एक्ल्याउने र सिध्याउने काममा अवरोध पैदा भयो ।
अमेरिकालाई मत्थर पार्दै भारतलाई सहमतिमा लिएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको माध्यमबाट राजतन्त्र हटाउने खेल शुरु गरियो । प्रतिक्रियावादी धाराको एकीकरण र कम्युनिस्ट प्रभावको नियन्त्रण यसको अन्तरवस्तु थियो । तर बढ्दो वाम जनमत र नेपालभित्र बढ्दो भारत विरोधी भावनाका कारण देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादसामु खतरा यथावत रह्यो ।
त्यसपछि सुनियोजित ढंगले वाम सरकार गठन गर्ने लोकपृय नाराहरु कार्यान्वयनमा अबरोध पैदा गर्ने कमजोर तत्वलाई उक्साउने ब्यक्तिवादी सोंचेको बिकास गर्ने अन्तरिक अन्तरविरोध चर्काउने जनताको समर्थन कमजोर पार्ने नेतृत्वलाई बदनाम गराउने र अन्ततः बिभाजित गर्ने र कठपुतली सत्ता स्थापना गर्ने चाल चल्न थालियो ।
भारतका दुई महत्वाकांक्षाले उसलाई उक्त कार्यको पछि लगायो, एक माओवादीको मध्यस्थतामा भाकपा मालेका भिभिन्न समूहलाई वार्तामा ल्याउने र सशस्त्र गतिविधि बन्द गराउने । रिमले शान्तिसम्झौताको विरोध गरिसके पछि यो सम्भावना बाँकी रहेन ।
दुई साम्राज्यवादको सहयोगमा दक्षिण एसियामा आर्थिक र सैनिक शक्ति बढाउने हस्तक्षेप कायम राख्ने । तर पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरु नेपालमा छद्म उपनिवेश कायम गर्दै पूर्वी एसियाको पकड बनाइ राख्न नेपालबाट चीनमाथि दबाव कायम राख्न र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न चाहन्छन् । मोदी सरकार आएपछि भारतले साम्राज्यवादको सेवामा आत्म समर्पण गर्दै आएको छ ।
यसरी नेपालको विद्यमान सरकारसहित संम्प्रभुता र राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले साम्राज्यवादी स्वार्थलाई सेवा पुग्ने निश्चित छ । त्यत्तिकै खतरा प्रचण्डको सम्भावित (भन्ने गरिएको) आत्मसमर्पण वा बिघटनमा पनि देखिन्छ । यो बाह्य र आन्तरिक परिस्थितिको साथमा हामीले आन्तरिक राजनीतिलाई आकलन गर्नु आवश्यक छ ।
बिगतका पार्टी बिभाजनको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसमा एउटा कुराले निरन्तरता पाएको छ । कमरेड पुष्पलाल र कमरेड निर्मल लामा बाहेक सबै नेतृत्वले आफ्नो स्थितिमा प्रतिकुलता पैदा भ‌एसँगै पार्टी फुटाउने काम भ‌एका छन् । रायमाझीले यसको शुरुवात गरेपछि कमरेड तुलसी लालले पार्टीलाई अकर्मण्य पारेर गुट चलाएर बस्नुभयो ।
चालिस र बयालिसको दुवै फुटको स्थितिमा कमरेड मोहनबिक्रम नै डिफ्याक्टो नेतृत्वमा नै हुनुहुन्थ्यो र दुवै स्थितिमा उहाँमाथि चुनौति देखा परेका थिए । कमरेड प्रचण्डले त लामाजीले नभ‌एर आफूले पार्टी फुटाएको स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । एकता केन्द्र मसालको फुटेको समयमा पनि कमरेड मोहन बिक्रम नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो र कमरेड रामसिंहले गोरखपुरको गुट भेला छोडेर हिडेपछि उहाँको पोजिसनमा प्राविधिक र नैतिक चुनौति देखिएको थियो ।
कमरेड वामदेव पनि पार्टी सत्ताको उपयोग गर्दै माले फुटाएर एमालेसँग एकतामा आउनुभएको थियो । यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि देखिन्छन् । यसरी प्रत्येक विभाजन पछि शक्ति कमजोर हुने गरेको तथा देश र जनताले क्षति व्यहोरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा यसपटक पार्टी बिभाजनको श्रेय कमरेड ओलीको पक्षमा जाने देखिन्छ ।
पार्टी भित्र चुनौतीहरुको सामना गर्ने दायित्वमा उहाँ नै हुनुहुन्छ र आफूले चाहेजसरी सरकार चलाउन चुनौती देखा परेको छ । यस्तै, अवस्थामा अथोरिटी जोगाउन पार्टी फोडेका धेरै उदाहरण छन् । यसको अर्थ केन्द्रमा कमरेड प्रचण्ड पक्षधरहरुले पनि उहाँलाई फुटको लागि दबाव नदिएको स्थिति भने होइन ।
सबै प्रकारका पीडा र अपमान सहेर पनि एकतालाई जोगाउन मेहनत गरेको इतिहास नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलाल र कमरेड निर्मल लामासँग मात्रै छ भन्न सकिन्छ । आजको सन्दर्भमा हामीले ईतिहासको शिक्षा लिनु पनि आवश्यक हुन्छ होला ।
यतिबेला पार्टी बिभाजनको बेडा जसले उठाए पनि देश र जनताको हितविरुद्धको कदम हुनेछ । अग्रगामी एजेण्डाको सफल कार्यान्वयनको स्पष्ट सुनिश्चितता र तत्कालै कार्यान्वयनको आरम्भ विना कसैले बिभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने छैन । एकीकृत अवस्थामा सम्भव नभ‌एको कुरा बिभाजनमा सम्भव हुने छैन, जगजाहेर नै छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन लामो र जटिल पृथक मोडमा प्रवेश गरेको छ । साम्राज्यवादको बदलिँदो चरित्र बित्तिय पूजिवादको वढ्दो प्रभाव र राष्ट्रिय पूँजीको चारित्रिक परिवर्तन रोजगारीका अवसरको रुपमा परिवर्तन बढ्दो बेरोजगारी, श्रमिक बर्गको स्थानान्तरण, बहुराष्ट्रिय पूँजीको बढोत्तरी र‌ अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरबिरोधमा परिवर्तन यस्ता कारण हुन्, जसले क्रान्तीका अधुरा कार्यभार र पुरा गर्ने विधिमा नै फरक ढंगले सोच्न आवश्यक हुन्छ ।
संविधान घोषणासँगै बुर्जुवा जनवादको लागि हुने संघर्षको चरित्र जुझारु र क्रान्तिकारी रहेन । अब क्रान्तीकारी आन्दोलनका नारा र स्वरुप निर्क्योल नगरी अगाडि बढ्न सम्भव छैन । हामी यो काम जति ढिलो गर्छौं, त्यति नै सुधारवादी अर्थवादी आन्दोलनले स्पेस भेटाइरहने छ, जनताको बीचको काम दिग्भ्रमित भैरहने छ । यसले पार्टीहरुको आन्तरिक गत्यावरोधको स्थिति बनिरहने र अवसरवादले मौका पाइरहने छ ।
यसकारण महाधीवेशन र यसको वरिपरि चल्ने राजनीतिक सैद्धान्तिक बहसले राजनीतिक जीवन प्रवाह गर्नेछ । सुस्पष्ट कार्यक्रम नीति दिशा र योजनाको अभावमा थोपिने फुटको अर्थ अवसरवाद बाहेक केही होइन । तर अवसर र लाभको लागि हुने बाँडफाँड र चोचोमोचोको एकता पनि कागलाई बेल पाकेसरह नै हो ।
त्यसैले फुट वा एकताको नाममा तरंगित हुने भन्दा बैचारिक राजनीतिक बहसको शिलान्यास गरौं । यसो भनिरहँदा कतिपय तरंगित मित्रहरुको स्वप्न भङ्ग हुन सक्छ, तर हामीले तपाईंहरुको कुखुरा जुधाइ होइन, देश, जनता र भावि आन्दोलनको चिन्ता र चासो राखेका छौं ।
झलनाथ खनालको वक्तव्यले खनाल-नेपाल समूहमा भुईँचालो
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लगिएको
सोमबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षापछि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को बौदीखोलामा आएको बाढीले बौदीकालीमा निर्माणाधीन पुल बगाएको छ
आफ्नै छोरीको जबरजस्ती करणी गरी हत्या !
कैलालीमा आफ्नै छोरीको जबरजस्ती करणी गरी हत्या गरेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको
बखानमा मेलम्ची थुनिएर विनाशको रूप लिँदा….
लगातार प्राकृतिक विपत्ति भोगिरहेको सिन्धुपाल्चोकमा मनसुन सुरु भएको पहिलो दिन नै प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो जनधनको
अब ‘स्मार्ट लक डाउन’ गर्ने निर्णय
कोभिड १९ व्यवस्थापन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम रोक्ने र सँगै
मेष– चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय